Apple wuxuu iibin lahaa qiyaastii 600.000 HomePods inta lagu gudajiray rubuca koowaad ee sanadka | Wararka IPhone
Apple wuxuu iibin lahaa qiyaastii 600.000 HomePods rubuca koowaad ee sanadka
Apple waligeed ma jabinayso tirada qalabka ay ku iibineyso nooc kasta oo ay ku iibiso suuqa dhexdeeda, kaliya ayaa na siisa tirooyinka iibka adduunka ee iPhone, iPad iyo Mac. Tan iyo markii ay Apple Watch suuqa ku dhufatay 2015, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waligeed ma bixin tirooyinka iibka ee qalabkan. Isla sidaas ayaa loo sameeyaa HomePod.
Iyagoo aan bixin tirooyinka rasmiga ah, falanqeeyayaasha ayaa lagu qasbay inay isku mashquuliyaan si loo xisaabiyo tirada ugu dhow ee unugyada. Sida laga soo xigtay kuwan, Apple Watch waa smartwatch oo adduunka ugu iibka badan, oo aan lagu xisaabtamin suuqa jijimooyin caqli badan. Marka laga hadlayo HomePod, waxaan ku jirnaa isla kiiska, oo aan lahayn xog rasmi ah. Laakiin haddii aan dhageysano falanqeeyayaasha, iibka HomePod wuxuu ahaa qiyaastii 600.000 cutubyo rubucii koowaad ee sanadka.
Cutubyadan 600.000 ayaa matalaya 6% wadarta iibka caalamiga ah ee kujira qaybta kuhadalka aftahanimada, gadaashiisa Amazon, Google iyo Alibaba. Sida laga soo xigtay Istaraatiijiyada Istaraatiijiga ah, Amazon waxay dhigtay 4 million Amazon Echo noocyadeeda kala duwan ee suuqa, iyadoo ka qaadatay 43,6% suuqa, halka Google ay iibisay 2.4 milyan oo ah noocyada Google Home, oo ka dhigan 26,5% Suuqa.
Shirkadda weyn ee Aasiya ee Alibaba ayaa ka sarreysa shirkadda Apple iyada oo la iibinayo 700.000 oo unug halka la iibinayo Xiaomi ayaa mas'uul ka ah xiritaanka kala-saarista qaybaha 200.000. Waxa ugu weyn ee ay saameysay imaatinka beddelka ayaa ahaa Amazon, oo ah kii ugu horreeyay ee yimaada suuqan 2014, marka la eego saamiga suuqa, maaddaama la eego tirada unugyada, waxay ku guuleysatay inay labanlaabto tiradaas, iyadoo ka socota 2 milyan oo unug oo la iibiyay rubacii koowaad ee 2017 ilaa 4 milyan oo cutub oo la iibiyey rubuca koowaad ee sanadka 2018.
Si kastaba ha ahaatee, Google wuxuu koray 700%, laga bilaabo iibinta 300.000 unug rubucii hore ee 2017 in la iibiyo 2.4 milyan rubuca hore ee sanadka 2018. Labada shirkadood ee Amazon iyo Google labaduba waxay xukumaan suuqa iyaga oo wadaagaya 70%, taas oo caqli gal ah marka la fiiriyo qiimaha moodooyinka ay soo bandhigaan soosaarayaashani, waana qiimo aad uga fog kan ay soo bandhigeen HomePod, Marka laga reebo loogu talagalay qaabka Google Home Max, oo ka qaalisan AppleP HomePod.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple wuxuu iibin lahaa qiyaastii 600.000 HomePods rubuca koowaad ee sanadka
YouTube wuxuu ku biirayaa xisbiga wuxuuna bilaabayaa adeegiisa muusikada qulqulka ah
Sida loogu daro jadwalka dhammeystiran ee Koobka Adduunka 2018 ee Russia adiga iPhone ama iPad